Laawuroon Arsenaqal Chelsii ni mo'ata; Maanchister Yunaatidis ni hinjifata jechuun tolmaameera - BBC News Afaan Oromoo
Laawuroon Arsenaqal Chelsii ni mo'ata; Maanchister Yunaatidis ni hinjifata jechuun tolmaameera
Madda suuraa, Alex Livesey
Akka tilmaama Laawurootti osoo ta'ee yeroo ammaa kana Maanchister Yunaayitid Maanchester Siitiidhaan qabxii tokko caalee argama ture. Dhugaan jiru garuu Siitiin Maacheedhaan qabxii 15niin caalee argama.
Taphoonni Piriimer Liigiin Ingiliiz tibba ayyaana waggaa kanas itti fufee jira. Wixata galgala tapha Maanchester dirree Evertenirratti qorama. Arsenaal ammoo Chelsii keessumsiisa.
Biraayiten Boornimaawoz waliin
Biraayitenis ta'e Boornimaawox taphoota torban darbe taasisaniin qabxii gaarii galmeessisaniiru. Biraayten Niiwuukasiil waliin walqixa ba'ee Boornimaawoz ammoo everteniin mo'ateera.
Biraayiten dirreesaa irratti goolii hedduu lakkoofisuu muuxannoo qabaachuu baatullee morkataasaa qabxii gachiisiisuu ni danda'a.
Tilmaama Laawuroo፡ 1 - 1
Barnilee Liiverpuul waliin
Warri Liiverpuul carraa goolii uumuun isaanii dabalaa dhufeera. Kutiiniyoo, Firmiiniyoo, Saalaahfi Maaneen dandeettii isaan yeroo kana irra jiran gammachiisaadha. Ta'us garuu humni toora ittisaa isaanii amansiisaa miti.
Warri Barnilee taphoota 10 dirreesaaniirratti taasisan keessa goolii 10 qofa lakkoofisuu kan danda'an. Ani Liiverpuul ni mo'ata jedheen tilmaama.
Tilmaama Laawuroo፡ 0 - 2
Leesiisteer Haaydesfiiildi waliin
Warri Leesiister dorgommii Liiverpuul waliin taasisaniin morkatoo cimoo turan. Kiloodii Puuyel erga kilabicha qabatanii dorgomaa gaarii ta'aa dhufaniiru.
Warreen Haayideersifiildi gama biraan si'a sadii walitti aansuudhaan walqixa ba'aniiru. Ta'us garuu sigigaachuurraa ofkalanii sadarkaa 11ffaa irra taa'aniiru.
Tilmaama Laawuroo፡ 2 - 0
Istook Niiwuukasiil waliin
Tapha Sanbata darbeen Chelsiin Istook Siitiitiin 5-0 haleelee ture. Maark Hiyuuz warra Istook tapha Cheslii sanaaf taphattoota muuxannoo hin qabne ture kan hiriirse.
Niiwuukasil haalli amma itti jiran gammachiisaa miti. Tapha Muddee keessa taasisan toorba keessaa qabxii afur duwwaa argachuu danda'an.
Tilmaama Laawuroo፡ 2 - 1
Everteen Yunaaytin waliin
Saam Alardaayis erga kilabicha qabatanii Everteen yeroo jalqabaaf kan mo'ame, kunis dirree Boornimaawozitti ture. Alaardaayis garee itti muddisiisuu itti danda'a. Cheslii waliin kan argines kanuma ture.
Yunaayitid taphoota sadan walitti aanan walqixaan xumureera. Raashfoordi ta[hoota hedduurra turuusaatiin dadhabbiirra jira kan jedhan Moriinoon Lukaakuufi Ibraan miidhamarraa waan jiraniif dargaggoo Ingiliiz kana akka hiriirsan ni eegama. Tapha kas mo'ichaan akka xumuran nan tilmaama.
Tilmaamaa Laawuroo፡ 0 - 2
Saawuuzhaampiteen Kiriistaal Palaas waliin
Saawuuzhaampiteen yeroo Yunaayitid waliin walqixa ba'anitti haala gaariirra jiru. Warri Paalaas ammoo carraa Siitii mo'uu danda'an balleessanii walqixaan xumuraniiru.
Ta'us garuu tapha kanaan Saawuuzhaampiteen ni mo'amu jedheen tilmaama.
Tilmaama Laawuroo፡ 1 - 0
Siwaansii Tootinhaam waliin
Kaarloos Karhaal leenjisaa Siwaansii ta'an erga jalqabanii tapha jalqabaatiin mo'icha argataniiru. Inniyyu dirreesaanii ala.
Taphataan sarara duraa Tootinhaam Harii Keen goolii sadii (hatiriikii) lakkoofsisuu yoo danda'a waggoota 71 keessatti Liigicha keessatti taphoota walitti aanan sadiitiin taphataa hatiriikii hojjete ta'a.
Tilmaama Laawuroo፡ 0 - 3
Westihaam westibiroom waliin
Westihaam bara Deeviid Moyees kanatti jijjiirama fiduu danda'eera. Westibiroomis erga Alaan Paardiwuun qacaree mo'achuu baatullee jijjiirama taphaa agarsiiseera.
Maanchester Siitii Waatifoordi waliin
Paalaasiin mo'amuurraa xiqqoof ofkalanillee waarreen Siittii bara dorgommii kana osoo hin mo'amiin xumuruu hin danda'an jedheen yaada. Gaardiyoolaanis tapha Shaampiyoonsi Liigii walakkeessa Bitootessa keessa jiruuf jecha taphattoota duraa boqochiisuu akka danda'an nan tilmaama.
Siitiin kilabii tokkoon akka mo'amu amanulleen Waatfoordi akka hin taane garuu sirriittan beeka.
Tilmaama Laawuroo፡ 4 - 0
Arsenaal Chelsii waliin
Bara dorgommii darbe keessatti Arsenaal taphoota Chelsii waliin taasise keessatti akka Cheelsiin waancaa fudhatu gochuu keessatti ga'ee taphatee ture. Arsenaal Chelsiitiin 3 - 0 erga dhukkee irraa kaasee booda Konteen erga hiriira taphattootaa jijjiiree taphoonni turan 13 walitti aansuun akka mo'atu isa taasiseera.
Arsenaal yeroo dirreesaa irratti taphatu ga'umsa gaarii agarsiisa. Anis tapha kan ni mo'atu jedheen tilmamaama.
Mootummaan 'qoccolloo TPLF'f deebii kennuuf kallattii kaa'e
Ameerikaan naannoo Affaar keessatti waaraanni deebi'ee eegaluutti yaaddahuu ibsite
28 Amajjii 2022
Kaaba Itoophiyaatti beelli hamaan mudachuu akka malu WFP akeekkachiise
Hidhattoonni 'manneen barnootaa 160 guban, barattoota kuma 300 ol bittinneessan' - MNO
BBC'n badhaasa 'Komlaa Dumoor' bara 2022'f dorgomsiisuu eegale
Seenaa baqataa kophaa balaa bidiruurraa lubbuun oole duuba jiru
Guyyaa J/ Taaddasaa Birruu Niilsan Maandellaa itti leenjise yeroo yaadatamu
Yeroo dhuma kan haaromfame: 29 Waxabajjii 2020
Namni fayyaafi qaama hir'uu hariiroo jaalalaafi gaa'elaan walitti dhufe akkamiin ilaalama?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 17 Amajjii 2021
Dubartii waliin dhooftuu biyyoota waliin geesse manni murtii hidhaa buuse
Yeroo dhuma kan haaromfame: 31 Caamsaa 2021
Dhaabbati gargaarsaa US Naannoo Oromiyaatiif birrii Bil. 10.2 maaliif ramade?
Yaaliiwwan misaa'eelii Kooriyaa Kaabaa duuba maaltu jira?
Dursaan fonqolcha mootummaa Burkinaa Faasoo haasawa jalqabaa taasise